COVID-19: Xaquuqda Kireystaha iyo Isbedelada Maxkamadda ee xilligan uu Dillaacay Cudurku | LawHelp Minnesota
COVID-19: Xaquuqda Kireystaha iyo Isbedelada Maxkamadda ee xilligan uu Dillaacay Cudurku
Markii ugu dambeysay ee wax la soo geliyey: 2020/10/12
Ogsoonow sida cudurka COVID-19 uu u saameeyo xaquuqdaadda kiraystaha ee Minnesota. Warqadan xaqaa’iqa waxa ay ka hadlaysaa mawduucyada hoos ku xusan. Hoos ugu dhaadhac qaybta aad su’aalaha ka qabto.
Kiradaadda iyo Kharashka: Ogow inay khasab tahay inaad kiro bixiso xilliga uu cudurkan dilaacay uu jiro, sida loo helo caawimaad ku saabsan bixinta kirada, in mulkiilaha gurigaagu uu kordhin karo kirada iyo in kale iyo waxyaabo kale.
Guri ka Saarida Xilligan Cudurku Dillaacay: Ogow hakinta guryo ka saarida ee Minnesota (joojinta guryo ka saarida), hakinta guri ka saarida ee heerka-qaranka ee Rugaha Xakameynta Cudurada [Center for Disease Control (CDC)], waxyaabaha laga reebay xeerarkaas.
Liiska Guriga: Maxaa dhici hadii heshiiska aan guriga ku deganahay uu dhamaanayo? Goorma ayey quman tahay in guriga horey looga ii baxo liiskana laga baxo? Mulkiilaha gurigaagu ma tusi karaa cid kale gurigaaga aad degan tahay? Maxay tahay inaad sameyso hadii uu gurigu u baahan yahay hagaajin?
Guryaha dowlada iyo guryaha la qaado: sharciyadu waa ay yare ka duwan yihiin kuwa kale hadii aad ku nooshahay guri dowladeed ama guryaha la qaado. Akhri qaybtan si aad u ogaato sida ay sharciyadu u kala duwanaan karaan.
Kiradaadda iyo Kharashka
Wali ma inaan kirada bixiyaa?
Haa. U bixi kirada sida caadiyan aad u bixiso rashiidna hel.
Hadii aadan kiradaadda bixin karin, markiiba la hadal qolada guriga. U sheeg qolada guriga inaadan bixin karin kirada. Hayso wixii warqado ah ee aad haysato ee ku saabsan sababta aadan kirada u bixin karin. Hadii aad haystao warqad ama emayl ku saabsan inaadan shaqeyn ama aad saacado yar iminka shaqeyso.
LAAKIIN, xataa hadii aadan bixin karin kirada, Guriga aad ku jirto qoladu lehi kaama saari karto kiis guri ka saarid ah maxkamad kama xareyn karo hadda. Shariifkuna kuuma inaan karo si uu guriga kaaga saaro.
Hadii qoladaaddu guriga ay isku dayayso inay guri kaa saarto:
Wac Xafiiska Legal Aid Markiiiba Waxaa leenahay qareeno ka jawaabi kara su’aalahaaga ku saabsan xaaladaadda
Ashtako ka xareyso Xafiis Xeer Ilaaliyaha Guud (Attorney General’s Office):adigoo isticmaalaya foomkan: https://www.ag.state.mn.us/Office/Forms/TenantEvictionComplaint.asp. Waxaad kaloo ka buuxin kartaa kana diri karaa foomkan khadka (on-line) ka.
Ka waran hadii aan u baahnahay caawimaad ah bixinta kirada ama biilalkayga?
Barnaamijyo badani waxa ay wax ka bedeleen nidaamkoodii sababtoo ah cudurka COVID-19 ka ee dillaacay. Hadii aadan horey xaq ugu lahayn, waxaa dhici karta inaad hadda xaq u yeelato barnaamijyadaa. La soo xiriir ururadda hoose si aad u eegto inaad hadda caawimaad ka heli karo adeegyadaa.
Caawinta bixinta kirada
Waxaa jira dhowr barnaamij oo kala duwan oo kaa caawin kara kirada. Barnaamij walbaa waxaa uu leeyahay nidaamyo u gaar ah oo xaq u yeeladka ah sidaa darteed, eeg dhamaan waxyaabaha la kala dooranayo ka dibna codso kuwa ku haboon xaaladaadda. Xafiiska degmadaadda ama qabiilkaagu waxa uu hayaa akhbaaraha cusub ee ku saabsan khayraadyada la heli karo. Waxaad sidoo kale wici kartaa 211 si aad wax uga ogaato khayraadyada kale ee gobolku hayo.
Gargaarada Kirada oo Gobolka oo dhan ka jirta:
Barnaamijka Gargaarka Guryaha ee COVID-19 waa barnaamij cusub oo gobolka oo dhan ka jira. Si aad u bilowdo codsigaaga gal shabakada, https://www.housinghelpmn.org/.
Ka codso gargaar degdeg ah, gargaar lacag cadaan ah, SNAP (cunto siin), iyo gargaarka haynta ilmaha shabakadan https://applymn.dhs.mn.gov/.
Barnaamijka ka Hor-tagga Hoy La’aanta ee Qoysaska waxa uu leeyahay 20 urur oo u adeegta dhamaan 87 degmo ee gobolka. Ka hel degmadaadda Safka koowaad ee (the Client Reference List Chart) ka dibna la xiriir ururka ama ururada caawiya degmadaadda.
Gargaarada Kirada ee Degmada:
Xafiiska adeegyada bulshada ee degmadaadda ama qabiilkaaga waxaa dhici karta inuu bixiyo gargaaro kale oo kirada ah. Xataa haddii laguu diiday ka hor COVID-19, waa inaad mar kale isku daydaa waayo qaar badan oo degmooyinka iyo qabiilada ka mid ah wax bay ka bedelaan nidaamyadoodii hore. Ka ogow akhbaarta la xiriirida ee xafiiska adeegyada bulshadda ee shabakadan degmadaadda ama qabiilkaaga: https://mn.gov/dhs/people-we-serve/adults/health-care/health-care-programs/contact-us/county-tribal-offices.jsp.
Degmooyinkani waxa ay u sameeyeen shabakado (websites) gargaarida kirada uun quseeya:
Degmada Hennepin (Hennepin County): https://www.hennepin.us/rent-help
Degmada Ramsey (Ramsey County): https://www.ramseycounty.us/residents/assistance-support/assistance/financial-assistance/emergency-assistance
Degmada Dakota (Dakota County): https://www.co.dakota.mn.us/HomeProperty/Evictions/Pages/eviction-prevention-assistance.aspx
Degmada Washington (Washington County): https://www.co.washington.mn.us/3279/Emergency-Rental-Assistance-Due-to-COVID
Degmada Carver (Carver County): https://www.co.carver.mn.us/departments/health-human-services/income-support/financial-assistance
Degmooyinka qaarkood waa ay fududeeyaan in la codsado caawimad degdeg ah. Tusaale ahaan Defmada Hennepin, (Hennepin County):
Waa inaad telefanka ku codsataa aadna afka uun ka tiraa akhbaarta codsigu waa sax adigoon wax warqado ah saxiixin.
Waa inay kuu ogolaadaan inaad adigu xaqiijin karto akhbaarta codsiga hadii aadan ka xaqiijin karin mulkiilaha guriga leh ama qolo-sedexaad.
Waa inay kuu ogolaadaan inaad tiraa dhib ma leh waa aad la hadli kartaan qolo- sedexaad iyagoon haysan warqad saxiixan oo ogolaanaysa bixinta akhbaarta. Waa inay kuu ogolaadaan inaad codsato gargaar degdeg ah 2 goor muddo 12-bilood ah hadii codsiga labaad sababtiisu ay tahay COVID-19 awgii.
Gargaarada Kirada ee Magaalada:
Magaalooyinka qaarkood waxa ay abuureen barnaamijyo gaar ah si loo caawiyo bixinta kirada. Ka eeg shabakada (website) magaaladaadda ama wac magaaladaadda si aad u eegto inay ka jiraan magaaladaadda caawimaadyo siyaado ah oo kiraystayaasha lagu caawinayo.
Hadii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo biilkaaga kulaylinta guriga
Waxaa dhici karta inaad caawimaad ka hesho Barnaamijka Gargaarka Korontada ee Minnesota (Minnesota’s Energy Assistance Program). Waa ay sahleen in caawimaad laga helo xilligan cudurka uu Dillaacay. Wac 1-800-657-3710 ka dibna geli ziip koodkaaga si aad u codsato.
Ka waran hadii aan ka walwalsanahay inaan helo caawimaad ku saabsan bixinta kiradayda sababtoo ah sharciga la’aantayda agweed?
Waxaa dhici karta inaad maqashay waxa la yiraa xeerka “cayr qaadashada’ “public charge”. Ka eeg warqadayada xaqaa’iqa ee arrintaa ku saabsan halkan What is Public Charge? Helida lacag caawimaad ah oo aad isaga bixiso kiradu ma hoos imaanayso xeerarka cayr qaadadka. Kolka aad codsato inaad hesho gargaar degdeg ah si aad ugu bixiso kirada (“emergency housing assistance”), kuma waydiin karaan inaad sharci wadanka ku leedahay, ama lambarka sooshal sakuuratiga, ama warqadaha canshuurta (inaad canshuur xaraysay iyo in kale). Akhbaarta aad bixiso kolka aad codsanayso caawimaadka ma ay arki karaan mas’uuliyiinta laanta (immigration) ee dowlada dhexe.
Hadii aad qabto wax su’aalo ah oo ku saabsan sida caawimaada bixinta kiradu ay u saameyn karto sharcigaaga ama manfacyadaada, wac xafiiska Legal Aid. Legal Aid waa lacag la’aan waan qarsoodi.
Ururada qaarkood waxa ay mudnaan hore siiyaan qoysaska aan sharciga lahayn, qaarkoodna waxa ay caawiyaan qoysaska ilmaha muwaadiniinta ah haysta xataa hadii waalidku uusan sharci lahayn. Waxaa dhici karta inaad xaq u yeelato in lagaa caawiyo kirada xataa hadii aad u qabto inaadan xaq u lahayn wax caawimaad ah. Inta badan waa ra’yi wanaagsan inaad soo wacdo oo aad bal eegto.
Waxa aad ka heli kartaa akhbaar cusub iyo ururada laga yaabo inay kaa caawiyaan bixinta halkan:
Ka waran hadii mulkiilaha gurigaydu uu iga rabo galmo maadaama aanan awoodin inaan bixiyo kirada?
Waa sharci-darro in mulkiilaha gurigaaga ama shaqaalahoodu ay kula yeeshaan shukaansi aadan doonayn, ay kaa dalbadaan inaad la galmooto ama aad u sameeyso wax axsaan galmo ah, ay isticmaalaan kalmaddo kale ama falal galmadda la xiriira ama ay ku kufsadaan ama ku faxa-xumeyaan adiga.
Hadii lagu fara-xumeeyo wac 911. Hadii aadan doonayn inaad u sheegato waxa dhacay booliiska laakiin aad doonayso inaad cid la hadasho, wac Khadka Rugta Dhibabka Galmada Fara-xumeynta ah (Sexual Violence Center Crisis Line) ee ah (612) 871-5111. Waxaad kaloo wici kartaa xafiiska legal aid si caawimaad ama amar maxkamadeed aad u hesho.
Ka Eeg warqadayada xaqaa'iqa Khashkhashaada Galmada ee Guryaha (Sexual Harassment in Housing) shabakada wixii akhbaar ah ee dheeraad ah.
Ka waran korontada iyada?
Korontada biilkeed wali waxa ay u socon sidii hore ee caadiga ahayd. Laakiin, Xcel Energy, Centerpoint, iyo magaalooyin kale iyo shirkado kale oo koronto waxa ay joojinayaan goynta korontada xilliga cudurka COVID-19 uu jiro.
Waxa jira oo kale xeer gaar ah oo la yiraa “xeerka cimilada qabow” ilaa iyo Abriil 15. Hadii aadan bixin karin biilka gaaska ama korontada oo dhan, shirkada korontadu kaama jari karto adeegyadaa hadii lala sameynto qorshe aad ku bixinayso aadna bixisid wixii aad awoodid. Eeg warqadayada xaqaa’iqa ee Jaritaanada Hiidka.
Waa sharci darro in qoladdu gurigu ay iskood kaaga gooyaan biyaha, korontada, gaaska. Hadii qoladdu gurigu ay saa sameyso wac Xafiiska Legal Aid markiiba.
*Minneapolis Uun: Magaaladdu waxa ay joojisay dhamaan biyo go’yntii oo dhan bishii Maarso 13, 2020 mudadda xaaladan degdega ah ee COVID-19 lagu jiro.
**St. Paul Uun: Magaaladdu waxa ay joojisay dhamaan biyo go’yntii oo dhan bishii Maarso 12, 2020 ilaa iyo Luulyo 11,2020.
Mudadii liiskaygu way dhamaatay. Mulkiilaha gurigu ima waydiin inaan guuro laakiin waxa uu yiri kiradu wax badan ayey kordhi. Taa ma ay sameyn karaan?
Waa suurta-gal. waxa ay ku xiran tahay taasi liiskaaga, inta kiradu ay kordhi doonto, iyo sharciyo kale.
Hadii aad haysato liis qoran, akhri liiska eegna waxa uu ka leeyahay kordhinta kirada. Waxaa dhici karta in liisku oranayo kolka mulkiilaha gurigu uu kirada kordhin karo. Ama waxaa dhici karta inuu oronayo kiradaadda lama kordhin karo muddo cayiman oo go’an.
Hadii aad leedahay liiska ka bil-ka-bilka ah, mulkiilaha gurigu waa khasab inuu ku siiyo ugu yaraan hal bil oo buuxda oo ogaysiis ah oo qoraal ah ka hor inta aan kiradu kordhin.
Waxaa dhici karta inuu ku ilaalinayo sharciga hakinta guri saaritaanada ee gobolka. Gudoomiyaha gobolka ee Walz (Governor Walz) waxa uu saxiixay amar sare bishii Maarso oo joojinaya guri ka saaritaanada intooda badan. Waxa aad ku muduci kartaa in wax ka bedelida lacagta kiradu ay la mid tahay ka bixid liiskaaga hadda iyo bilow mid cusub. Tani waa mudac cakiran. Waxaa fiican inaad hesho qareen ka socda xafiiska (Legal Aid lawyer) si uu kuu caawiyo. Ka baar Tilmamaha Daryeel-bxiyeyaasha iyo Rugaha (Providers and Clinics Directory) si aad u hesho xafiiska gargaarka sharciyada (legal aid) ee deegaankaaga.
Xataa hadii aadan bixin kirada siyaadada ah, mulkiilaha gurigu kaama saari karo guriga iminka waayo waxaa jira sharci hakinaya guri ka saarida hada. Lacagta lagugu yeelano laakiin waa sii badan karaa. Waxaa dhici karta inay khasab kugu noqoto inaad bixiso lacagtaa kolka hakintu ay dhamaato.
Gudoomiyaha gobolka ee Walz (Governor Walz) waxa uu saxiixay amar sare oo kale oo joojinaya “ “kor u qaadida kirada” guryaha iyo gabaadyada. Waxa uu dhigayaa amarkaasi hadii kiro kordhini ay “ xad-dhaaf siyaado u tahay” inaan la ogolaan karin in taasi dhacdo. “Xad dhaaf siyaaddo u ah” waxa uu macnaheedu noqon karaa:
Kiro aad uga sareeysa heerkii ay ahayd markii hore
Kirada 20% ka sareeysa heerkii ay ahayd markii hore
Kirada aadka uga sareeysa kirada uu mulkiilaha gurigu ka qaado guryaha kirada ah ee la midka ah kuwaaga
Tani waa arrin aad u dhib badan. Hadii aad qabto wax su’aalo ah, la soo xiriir xafiiska (Legal Aid) markiiba. Ka baar Tilmamaha Daryeel-bxiyeyaasha iyo Rugaha (Providers and Clinics Directory).
Guri ka Saarida Xilligan Cudurku Dillaacay
Guriga ma la iga saari kartaa qolada lehi?
Maya. Gudoomiye Gobolka Walz waxa uu ku dhawaaqay Xaalad Degdeg ahi inay jirto. Guryo ka saaridii Minnesota waa la hakiyey xilliga xaaladdani jirto. Badankooda Guriga aad ku jirto qoladu iska lehi kaama saari karo kiis guri ka saarid ahna maxkamad kama xareyn karo hadda.
Waxaa sidoo kale jira sharci heer qaran ah ee ay leedahay hay’ada Rugaha Xakameynta Cudurada [Centers for Disease Control (CDC)]. Sida sharcigani dhigayo, hadii aadan bixin karin kirada sabatuna tahay cudurkan Dillaacay, guriga aad ku jirto lagaama saari karo. Mamnuuca guriga ka saarida kiraystaha ee Minnesota waxa ay dhamaanaysaa bisha Deseembar 31, 2020, laakiin sharciga heerka qaran ahi wali waa ku ilaalinayaa. Hadii ay taasi dhacdo waa inaad siisaa warqad mulkiilaha guriga aad ku jirto iska leh. Warqadu waxa ay u baahan tahay inay ku qornaadaan akhbaar ku saabsan xaaladadda. Uma baahnid hadda inaad wax sameyso. Ka eeg shabakada www.LawHelpMN.org hadii mamnuuca guri ka saarida ee Minnesota uu dhamaado aadna qabto su’aalo ku saabsan sida loo qoro warada.
Waxaa jira waxyaabo laga reebay mamnuuca guri ka saaritaanka ee Minnesota:
Qolada guriga aad ku jiro iska lehi waxa ay xareysan kartaa dacwo ay guri kaaga saarayso adiga hadii adiga ama qof gurigaaga joogaa uu cid kale amaankeedda uu khatar weyn ku yahay. Kuwaa waxaa ku jira kolka qofkaasi gurigaaga, ama daaradiisa uu joogo ama uu joogo meelaha dadku wada wadaago ee sarta aad ku jirto. Qolada aad guriga uga jirtaa KAAGAMA saari karaan guriga sabab ah wax ka dhacay guriga meel guriga ka baxsan.
Qolada aad guriga uga jirtaa guriga waa kaa saari karaa hadii guriga aad jajabiso.
Qolada aad guriga uga jirtaa waa ay u joojin karaan heshiiska aad guriga ku degan tahay hadii iyaga ama dad ehelkood ahi ay doonayaan inay guriga ku noolaadaan. Qolada guriga iska lehi mar walba waa inay u hogaansamaan heshiiska iyo sharciga. Waa inay ku siiyaan ogaysiis qoran oo oronaya heshiiskii waa uu dhamaanayaa. Caadiyan, qolada guriga aad kaga jirtaa waa inay ku siiyaan bil ogaysiis ah ka hor inta aanu heshiisku dhamaan. Ka eeg warqadayada xaqaa’iqa ee Ogaysiiska Banaynta iyo Joojinta Heshiiska (Notices to Vacate and Ending a Lease) wixii akhbaar ah ee ku saabsan xaquuqdaada kolka uu qofka aad guriga kaga jirtaa uu isku dayo inuu joojiyo heshiiska guriga aad ku dagan tahay.
Qolada guriga aad kaga jirtaa waa inay ku siiso ogaysiis qoran oo digniin ah oo kuu sheegaya inay doonayaan inay dacwo guri ka saarid ah oo adiga kaa dhan ah ay maxkamad ka xareysanayaan. Qolada aad uga jirtaa waa inay ku siiso ogaysiis ugu yaraan 7 cisho ah ka hor inta aysan ka xareysan dacwo guri ka saarid ah maxkamad.
Gudoomiyaha Gobolka Walz (Governor Walz) waxa uu horey u dheereeyey mudada Xaalada Degdeg (Peacetime Emergency) ay jirto sababtoo ah cudurka dillaacay ee COVID-19 wali waa jiraa. Waxaa dhici karta inuu mar labaad dheereeyo mudadda oo uu ka daba-mariyo 2020/11/12. Waxaa dhici karta inaadan ogaan ka hor 2020/11/12 in la dheereynayo mudada iyo in kale. Ka eeg halkan www.lawhelpmn.org wixii akhbaar ah ee soo cusboonaada.
Waxyaabo yar yar ayeysan arintani quseyn. Hadii qolada gurigu ay rabto inaad ka guurto:
Wac Legal Aid Markiiiba. Waxaa leenahay qareeno ka jawaabi kara su’aalahaaga ku saabsan xaaladaadda.
Ashtako ka xareyso Xafiis Xeer Ilaaliyaha Guud (Attorney General’s Office): adigoo isticmaalaya foomkan: https://www.ag.state.mn.us/Office/Forms/TenantEvictionComplaint_so.asp. Waxaad kaloo ka buuxin kartaa kana diri karaa foomkan khadka (on-line) ka.
Dadka aan wadanka sharciga ku lahayni waxa ay leeyihiin xaquuq guryaha oo la mid ah kuwa dadka kale marka ay noqoto arrimaha guryaha iyo guri ka saarida.
Shariifowgu ma iiga bixin karaa gurigayga “amarka maxakamadeed”?
Hadii lagaaga adkaaday kiiskaagii guriga, ama aadan raacin heshiis, ama maxkamad aad gaftay, xaakimku waxaa dhici karta inuu soo saaro amar ah in guriga lagaa saaro “writ of recovery.” Tani waa warqada siisa shariifka awooda uu kuugu imaan karo si uu guriga kaaga saaro. Hadii aad u malaysanyso in maxkamaddu ay khalad sameysay, ayna tahay inaad guriga ku sii jirto, wac Xafiiska Legal Aid markiiba.
Gudoomiyaha Gobolku waxa uu hakiyey dhamaan intoodii badnaynd amarada maxkamadda ee guri ka saarida ah “writs of recovery”. Tan macnaheedu waa shariifowgu kuuma imaan karo si uu kaaga bixiyo gurigaaga marka laga reebo marka ay jiraan xaaladaha lagu sharxay sadarka soo socda. Haddii qolada gurigu ay isku daydo inay guriga kaa xirato ama ay hay’adaha sharci ilaalintu ay kuu yimaadaan si ay kaaga saaraan gurigaaga, wac 911 iyo Legal Aid ka markiiba.
Laga bilaabi Agoosto 4, 2020, shariifku waa uu kaaga saari karaa gurigaaga sababahan soo socda:
Amar ay maxkamadi bixisay ka hor Maarso 24, 2020 5:00 galabnimo.
Amar ay maxkamadi bixisay ka dib Agoosto 4, 2020 hadii ay sababtu tahay mid ka mid ah kuwa kor ku xusan ee “qolada gurigu guriga ma iga saari kartaa?”
La soo xiriir (Legal Aid) markiiba hadii Shariifku uu isku dayayo inuu gurigaaga kaa saaro.
Maxaa dhici ka dib Kolka ay dhamaato Xaalada Degdeg ahi (Peacetime Emergency)?
Hadii Xaaladda Degdeg ahi ay dhamaato (Peacetime Emergency) ka dib bisha Deseembar 31, 2020, mulkiilaha guriga iska lehi waa uu xareysan karaa dacwo guri ka saarid ah hadii aadan bixin kirada. Warqadaha maxkamada laga xareysto ee guriga ka saarida waxaa la yiraa u Yeerid iyo Ashtako (Summons and Complaint). Waa khasab inaad hesho warqadaha maxkamada ugu yaraan 7-cisho ka hor waqtiga maxkamada la qaadayo. Waa adag tahay in la ogaado inay khasab noqon doonto inaad guurto, inta uu yahay waqtiga aad haysato ee aad ku guurayso, inay khasab tahay inaad bixiso kirada lagugu leeyahay, ama inaad guriga aad hada ku jirto aad ku sii jiri karto ka dib qaadida maxkamada. Laakiin nidaamka guri ka saarida dadka ee Minnesota waa mid degdeg ah. Markiiba waa inaad heshaa talo dhanka sharciga ah. Akhri warqada xaqaa’iqa guri ka Saarida (Evictions) si aad u hesho akhbaar dheeri ah.
Qolada guriga iska lehi ma iga saari kartaa gurigayga iyagoon maxkamad tagin?
Maya. Qolada guri lahi waa inay maxkamad marka hore tagtaa ayna raacdaa sharciyada guri ka saarida kireystaha. Qolada guriga kaama xiran kirto guriga ama ma sameyn karto wax kale oo keeni kara inaad iska tagto. Hadii ay taasi dhacdo, wac booliiska (911) ma xafiiska Legal Aid markiiba. Eeg warqadayada xaqaa’iqa ee Ka Xirashada si Guri qof ugu Baxa waa Sharci darro_(Lock-Outs and Shut-Offs to Evict Are Illegal).
**Degmooyinka Hennepin iyo Ramsey: Wali waa aad xareysan kartaa kiis maxkamadeed si aad uga dagaalanto guri ka xirasho sharci darro ah.
Ka wadan hadii heshiiska guri daganaantu uu dhamaanayo dhawaan, ama qolada gurigu i siiso ogaysiis ah inaan ka guuro?
Qolada gurigu kaama saari karto gurigaagga inta xaaladan degddeg ahi jiro, hadii aadan dambi culus geysan ama aadan sameyn dhib weyn oo khatar ku ah amniga dadweynaha. Wali waa inaad bixisaa kirada bil walba. Qolada guri baxar ayey geli hadii ay isku dayaan inay guriga kaa saaraan iminka.
Hadii liiska gurigaagga aad ku degan tahay uu dhacayo bisha aakhirkeeda, liisku wali waa dhici laakiin mulkiilaha gurigu kuguma khasbi karo inaad guurto. Mulkiilahu kaama xiran karo kaamana saari karo guriga waqtigan. Kolka xaaladda degdeg ah laga baxo. Mulkiilaha gurigu waxaa dhici karta inuu xareysto dacwo guriga ka saarid ah oo adiga kaa dhan ah hadii aad wali gurigii ku sii jirto. Waxaa dhici karta iyana inuu kugu soo dalaco kirada mudaddii dheeraad ahayd ee guriga sii joogtay.
Hadii wax degdeg ahi ay jiraan, wac 911.
Hadii wax laguu geystay ama lagugu tacdiyey wac, khadka Minnesota Day One Crisis Hotline ee 1-866-223-1111. Waxa ay kaa caawin karaan inaad ka hesho caawimaad, amaan iyo gargaar hesho.
Ma ka bixi karaa heshiiska liiskayga iyadoo sababtu tahay walwal aan ka qabo cudurka COVID-19?
Laga yaabee. Liiskaagu wali waa uu shaqeynayaa walina kirada waa lagugu leeyahay. LAAKIIN, la hadal mulkiilaha gurigaaga si aad u eegto inay kuu ogol yihiin inaad guriga horey ugu sii baxdo. Hadii ay ogolaadaan, heshiiskaa ogolaanshaha ah isagoo qoran hel. Waa aad soo wici kartaa xafiiska Legal Aid si aad u hesho talo ku haboon xaaladaadda.
Hadii aad naafa tahay ama aad qabto cudur ka dhigi kara guriga aad hada ku jirto mid aan amaan ahayn, codso in laguu fidiyo wixii maciin ah ee macquul ah. Eeg warqadayada xaqaa'iqa ee Maciinada Macquulka ah (Reasonable Accommodations).
Mulkiilaha gurigaygu ma tusi karaa dad kale oo raba inay mustaqbalka ka kireystaan hadii aan khatar siyaado u ahay inuu igu dhaco cudurka COVID-19?
Laga yaabee. Dadka wali waa loo ogol yahay inay guuri karaan xilligan Xaaladadda Degdeg ahi jirto. LAAKIIN, la hadal mulkiilaha gurigaagga si aad u eegto inay wax bedeli karaan sida ay u sameeyaan tusidaha. Qaarka mid mulkiilahyaashu waxa ay ku sameeyaan tusidaha fiidyow ahaan.
Hadii mulkiilaha gurigaagu uu bedeli waayo sida ay u sameeynayaan tusidaha, ka codso maciin macquul ah in la helo oo ku salasan xaaladaadda caafimaad. Eeg warqadayada xaqaa'iqa ee Maciinada Macquulka ah (Reasonable Accommodations).
Ka waran hadii gurigaygu wax ka halaabaan oo uu u baahdo hagaajin degdeg ah?
Hagaajinaha degdeg ah waa sida waxyaabaha:
Biyaha aan shaqeynayn
Madbakha iyo kurshiinka
Adeegyada aasaasiga ah iyo tas’hiilaadka, sida albaabka hore ama kan dambe ama haandaraabka ama daaqadaha oo maqan
** Degmooyinka Hennepin iyo Ramsey: Wali waa aad xareysan kartaa kiis maxkamadeed oo ku saabsan hagaajinada degdeg ah.
Bilow inaad wacdo qoladda guriga. Hadii qoladda gurigu aysan ku hagaajin guriga wixii ka halaabay 24 saac gudahood, wac Xafiiska Legal Aid markiiba. Maxkamadda degmadaaddu waxaa dhici karta inay leedahay xeerar gaar ah oo quseeya kireystayaasha u baahan caawimaad ah hagaajinada degdeg ah. Eeg warqadayada xaqaa’iqa ee Dhibabka Hagaajinada Degdeg ah (Emergency Repair Problems).
Ka waran hadii uu gurigaygu u baahdo hagaajino aan degdeg ahayn markaa?
Hadii aad u baahato in la hagaajiyo waxyaabo aan degdeg ahayn ka bilow marka hore inaad qoraal ahaan ugu sheegto qolada guriga wixii halaysan ee u baahan hagaajin. Hadii magaaladaadu ay leedahay waax qaabilsan fatashaadaha, iyana waa aad wici kartaa.
Hadii qoladdu gurigu aysan hagaajin wixii halaysnaa 14-cisho ka dib, waxaa aad xareysan kartaa kiis maxkamadeed. Wax Xafiiska Legal Aid si aad wax uga ogaato arrintaa. Maxkamadda degmadaaddu waxaa dhici karta inay leedahay xeerar gaar ah oo quseeya kireystayaasha u baahan caawimaad ah hagaajinada. Eeg warqadayada xaqaa’iqa ee Hagaajinta wixii Halaaba ee Qolada Guriga (Getting a Landlord to Make Repairs). Maxkamadu waxaa dhici karta inaysan balan maxkamadeed aanay u qaban dhowr asbuuc kiisaska hagaajinta wixii halaaba ah. Laakiin, wali waa fikrad wacan inaad bilowdo hawsha sida si ugu dhaqsaha badan.
Guryaha dowlada iyo guryaha la qaado
Ka waran haddii aan ku noolahay guri dowladeed ama ay iga caawiso kirada guriga hay’ada section 8 ama barnaamij kale?
Wac adeegahaaga si aad u eegto in qolyaha guriga dowladdu ay wax ka bedelayaan nidaamyadooda cudurka COVID-19 awgiis.
Ka hel akhbaarta [Minneapolis Public Housing Authority (MPHA)], iyo waxa ay kuu sameyn karaan halkan: https://mphaonline.org/coronavirus-covid-19-mpha-actions-and-updates/
Dowlada Dhexe waxa ay joojisay dhamaan ka saarida guryaha dadka degan guryaha hela dhaqaalaha dowlada dhexe ilaa ugu yaraan Luulyo 26, 2020. Ama ha laga kabo guriga kiradiisa ama yaan laga kabine.
Xeerkan cusubi waxaa uu quseeyaa guryo aad u badan. Mulkiilaha gurigaagga iska leh waxaa dhici karta xataa inuusan ogayn in joojintani ay quseeyso isaga iyo in kale. Hadii qofka iska leh guriga aad ku jirto uu isku dayo inuu kaa saaro, wac xafiiska Legal Aid ka markiiba.
Xataa, ka dib Luulyo 26, 2020, mulkiilaha guryaha hela gargaarada dhaqaale ee dolwada dhexe, waa khasab inuu marka hore siiyo qofka guriga uga jira ogaysiis 30 cisho ah ka hor inta uusan ka xareysan kiis guri ka saarid ah maxkamad – xataa hadii aan kirada aan la bixin.
Ka waran haddii aan ku noolahay guryaha santaqadaha ah ee dibada la dhigo?
Wareegytada guryo ka saaridu waa quseeyaan guryaha santaqada ah ee barxadaha la dhigto kiradooda. Taa macneheedu waa qolada barxadahu kaama eryi karaan barxada kirada barxada bixin la’aanteeda awgeed.
LAAKIIN, laalida guro la wareegidu wali ma quseeyso sandaqadaha ama guryaha gacanta lagu sameeyo., taa macnaheedu waa aad wali guriga gadanayso, beecshahu waxa uu bilaabi karaa falka dib ula wareegida ah iyo inuu kaa saaro. Tani waa run xataa hadii aad guriga ka gadanayso barxadaha sandaqadaha guryaha ama cid kaleba.
Hadii aad gurigaagga ka gadanayso barxad aadna bixin kartid guriga lacagtiisa uun ee aadan ku dari karin kirada, si cad ugu qor jeega lacagta korkiisa in lacagta aad bixinayso aad ku bixinayso guriga ee aysan ahayn kirada barxada. Hadii aad ku bixinayso lacag cadaan ah, sii warqad la socota lacagta oo taa oranaysa. Hubi inay ku qoran tahay kiradu.
Ogow: Si lagaala wareego guryaha gacanta lagu sameeyo, gadagu waa inuu bixiyo ogaysiis 30 -cisho ah ka hor inta uusan kiis maxkamadeed xareysan.